Ny Telefónica ao Espana sy ny tsy fiandaniana eo amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2010 13:12 GMT
Mbola miresaka tsy fiandaniana eo amin'ny aterineto indray ireo mpitoraka blaogy Espaniola, fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ny Fankatoavana ny Google-Verizon sy ny politika arosony ao Etazonia no ifantohana, fa zavatra somary akaiky kokoa sy manana fiatraikany haingana amin'izy ireo: Telefónica (ny mpamatsy faran'izay goavana amin'ny resaka fifandraisan-davitra ao amin'ny firenena) sy ny fanehoan-keviny hanafoana ny sarany raikitra ary hanangana kazana tolotra telo rakofan'ny kalitao sy ny fampiasana ireo antontan-kevitra momba ireo mpampiasa izany.
Juan Varela, ao amin'ny blaoginy Periodistas21 dia manazava [sp] ny votoatin'ity tolo-kevitra ity fa ny Telefonica dia noforonina ho an'ny Komitin'ny Tsenan'ny Fifandraisan-davitra Espaniola ho an'ireo tolotra vaovao afaka hanolo ireo efa misy ary mikatsaka ny:
Raha ny tena fiafarany, dia ny hanoloana ny aterineto misokatra misy amin'izao fotoana ho tambajotra azon'ny besinimaro idirana malalaka sy ireo tambajotra hafa andoavam-bola: fidirana amin'ny sehatra niomerika sy votoatin-kevitra andoavam-bola. Aterineto mitsipotipotika sy lafo kokoa. Izany ny tanjon'ireo mpandraharaha ny fifandraisan-davitra mba hampidiram-bola bebe kokoa avy any amin'ireo mpanjifa sy mba hahazoana ny anjarany amin'ny fidiram-bola amin'ny votoaty amin'ny aterineto sy ireo tolotra ara-aterineto, indrindra fa ny fahitalavitra sy ny fisintonana horonantsary (P2P na mivantana) sy ny antso mivantana amin'ny aterineto (VoIP), fa misy ihany koa ireo tolotra vaovao amin'ny fitoerana ara-jeografia, ny fampitomboana ny zava-misy, fitsaboana amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra, sy ny sisa.
Manambara ihany koa izy fa “tsinjaraina amin'ny kalitaon'ny fidirana nanaovana fifanarahana sy ny fanjifàna atao ny vidiny sy ny fifanekena, raha hatramin'izao dia ny fidirana amin'ny raitra sy ny haingam-pandeha ihany no fidian'ny olona.” Tokony ho tahaka ity ny fanasokajiana vaovao ireo tolotra:
Ny kalitao “eo noho eo” (RT-realtime), no lafo indrindra sady azo antoka indrindra amin'ireo tolotra raitra sy ny fampiasàna betsaka ny “bande passante”, ary natao ho an'ireo rindrambaikon'ny haino aman-jery mivantana.
Ny kalitao “Gold” dia natao indrindra ho an'ny tontolon'ny orinasa, tsy misy fiandrasana na fahaverezana antontan-kevitra (“données”).
Ny kalitao “Best Effort” dia natokana indrindra ho an'ny fidiran'olon-tsotra amin'ny aterineto. Ny zavatra takiany fotsiny dia ny tolotra tsy ahitana fahadisoana, nefa tsy manome antoka amin'ny haavon'ny kalitaon'ireo tolotra ho an'ny fanjifana vaventy.
Nanaparitaka izany koa ny haino aman-jery, nampahafantatra izany tamin'ny fomba toa maneho fa tsy miombon-kevitra amin'izany ry zareo. Publico.es ohatra dia niteny: Dingana voalohany ity mankany amin'ny faran'ny aterineto misy sarany raikitra [sp], ary ny Información.es dia nanome lohateny ny lahatsorany manao hoe: Tsy te-hivarotra ADSL misy sarany raikitra amin'ireo mpandraharaha hafa intsony ny Telefonica [sp]. Raha ny El Pais indray, gazety mpivoaka isan'andro, dia milaza fa [sp] “ny orinasa Britanika eo ambanin'ny Telefonica, dia nanapa-kevitra ny hametra ireo tetikasa aterneto haingam-pandeha misy sarany raikitra rehetra ho an'ireo tokantrano” any UK.
Fa any amin'ireo blaogy sy ireo vohikalan'olon-tsotra mpanao gazety no matetika resahana izany. Ohatra, Pau Llop ao amin'ny Bottup.com dia namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Tsy fiandaniana ao amin'ny Aterineto: Hamela azy ireo hanala izany ve isika? [sp] izay nilazany fa:
Ny adihevitra, nofohazin'ny Telefónica indray, dia mifantoka amin'ny: “izay mandany betsaka dia mandoa betsaka.” Manolotra hevitra izy ireo ny hanafoanana ny sarany raikitra miaraka amina fialan-tsiny vendrana hoe misy ireo olona no “mampiasa bebe kokoa ny aterineto” ary ny sasany “izay mijery mailaka fotsiny.” Ity no dingana voalohany. Raha manaiky ny hevitra hoe “iza no miraharaha? Izaho tsy misintona sarimihetsika” isika, dia tsy hijanona ela ho tsy mpiandany amin'ny ambaratonga voalohany intsony ny aterineto ary atsy ho atsy dia ho avy ny fanaraha-maso ny aterineto ho tombontsoan'ireo mpandraharaha ara-barotra sy ireo mpampiasa vola aminy.
Avy eo izy dia nanome sosokevitra mikasika ireo hetsika azontsika atao mba hampitomboana ny fahatsiarovan-tena mikasika ity resaka ity:
Raha manana blaogy ianao na toerana hafa famoahan-dahatsoratra, mianara ary manorata mikasika ny lanjan'ny tsy fiadaniana ao amin'ny aterineto.
Raha mampiasa ny Facebook, Tuenti, Twitter, sy ny sisa ianao, manorata hafatra mikasika ny tsy fiandaniana ao amin'ny aterineto ary mizarà rohy mankany amin'ireo lahatsoratra, horonantsary na koa vaovao manazava ny lanjan'ny fiarovana azy ireny. Raha mahazo hafatra tahaka izany ianao, zarao amin'ireo namanao ao anatin'ilay tambajotra izany.
Rehefa maheno any amin'ny vaovao na any amin'ny onjam-peo ny zavatra mikasika izany ianao, resaho miaraka amin'ireo namanao izany ka hazavao ny antsoina hoe tsy fiandaniana amin'ny aterineto, ary ny antony mahatonga izany ho zava-dehibe. Ampidiro any amin'ireo resadresaka rehetra fantatrao fa azo anaovana izany ny momba azy, aza mametra ny tenanao amin'ny tontolon'ny niomerika.
Mbola mihantona ny valinteny ofisialin'ny mpandraharaha tamin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny Telefonica, fa ny ankabeazan'ireo mpitoraka blaogy dia mieritreritra fa raha tsy misy fahatsiarovan-tena amin'ny sehatra rehetra mikasika ny tena dikan'ny tsy fiadaniana ao amin'ny aterineto dia ho ekena mora foana ity soso-kevitra ity.
Ireo lahatsoratra hafa momba ity foto-kevitra ity (amin'ny teny Espaniola):
Ny sary nampiasaina ho sary famantarana dia nalaina tao amin'ny Bottup.
Misaotra an'i Silvia Viñas sy Leila Nachawati tamin'ny fanampian'izy ireo namerina namaky ny dikantenin'ity lahatsoratra ity hifanaraka amin'ny lahatsoratra fototra niaingana.